Inqanaba lokwamkelwa kwe-iOS 14 sele likufutshane nama-50% | IPhone iindaba
IOS 14 sele ifakiwe phantse kuma-50% ezixhobo
Ingelosi Gonzalez | | iOS 13, iOS 14, Izaziso
Kungcono ufike mva kunokuba ungezi. IOS 14 yafika ngokusemthethweni ngoSeptemba 16. Sitsho ngokusesikweni kuba sineenyanga ezine kunye nokubheja kwabo bobabini abaphuhlisi kunye noluntu. Inkqubo ye- izinga lokukhuphela Kwiiveki zokuqala yamkelekile, njengoko sinokubona kwigrafu elapha ngasentla. Nangona kunjalo, ekuqaleni kuka-Okthobha kwagxininisa ukunyuka nge-2% ngeveki. Nangona Ukhuphelo lwalurekhodwa ekuqaleni Azininzi kangako xa kuthelekiswa ne-iOS 13 kunyaka ophelileyo ngeli xesha. Enkosi kolu hlolo sinokuqinisekisa ukuba okwangoku Kukho izixhobo ezininzi ezine-iOS 14 kune-iOS 13 kunye IOS 14 yokwamkelwa kwenqanaba lokufikelela kwi-46,54%.
I-Spotify ekugqibeleni ivula iwijethi yayo kwiscreen sasekhaya se-iOS 14
IOS 14 iphucula inqanaba lokwamkelwa kwayo kwaye iphantse yafikelela kuma-50%
Inkqubo entsha yokusebenza izise inqanaba elikhulu lokwenza ngokwezifiso ngokufika kwamawijethi kwiscreen sasekhaya. Ukongeza, inkqubo ifumene uhlengahlengiso oluncinci kunxibelelwano lomsebenzisi ukuba ingangxami kwiminxeba okanye ukufika kwethala leencwadi lesicelo. Olu tshintsho lwabasebenzisi abaninzi sele isisizathu esivakalayo sokuqhubeka notshintsho ukusuka kwi-iOS 13 ukuya kwi-iOS 14. Rate izinga lokukhuphela kunye nenqanaba lotshintsho ukusuka kwinkqubo yokusebenza ukuya kwenye Isinika umbono wenqanaba lotshintsho kwisizukulwana kunye nokwamkelwa kwenkqubo entsha yokusebenza. Kwelinye icala, singayithelekisa le datha naleyo yonyaka ophelileyo apho isuke khona kwi-iOS 12 ukuya kwi-iOS 13 ngaxeshanye.
Okwangoku, IOS 14 iphantse yafikelela kuma-50% ezixhobo endikwaziyo ngoku bajonga. Ngapha koko, kunye nokuchaneka ngakumbi, i-46,54% sele inenkqubo yokusebenza entsha efakwe kwizixhobo zabo. Ngelixa kusekho i-46,16% isene-iOS 13. I-7,29% ineenguqulelo ngaphambi kwe-iOS 13 efakiweyo okoko ziyekile ukufumana uhlaziyo okanye bagqiba kwelokuba bangahlaziyi kwiinguqulelo eziphezulu.
Masibone uthelekiso kunye nedatha yonyaka ophelileyo. Umzuzu apho i yenyusi yenkqubo entsha yokusebenza ngokuchasene nendala nge-iOS 12 kunye ne-iOS 13 yeza ngo-Okthobha 7. Nangona kunjalo, nge-iOS 14 yenzeke namhlanje, nge-28 ka-Okthobha. Ukuthelekisa sibona ukuba i-iOS 13 yakhutshwa nge-19 kaSeptemba 2019, ngelixa i-iOS 14 yakhutshwa nge-16 kaSeptemba 2020.
Ngamafutshane, ukwamkelwa kwenkqubo entsha yokusebenza kuye kwakho ukwanda okubonakalayo kwiiveki ezimbini zokuqala yayifumaneka. Nangona kunjalo, ukuncipha kwenani lokukhuphela kuye kwaphawulwa ngo-Okthobha wonke. Nangona sinokukuqinisekisa oko IOS 14 sele ikwizixhobo ezininzi kune-iOS 13 echukumisa i-50%.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 13 » IOS 14 sele ifakiwe phantse kuma-50% ezixhobo
I-Apple iya kuqinisa uphuhliso lwenye indlela yokukhangela kuGoogle
I-Word, i-Excel kunye ne-PowerPoint ngoku ziyahambelana ngokusemthethweni ne-trackpad kwi-iPadOS